ZESA Yokwikwidza Chisungo Chakabuda neVayananisi paGakava Rayo neVashandi Vayo
Chikunguru 31, 2012
Kambani yemagetsi yeZESA Holdings inonzi yave kuda kuti zvakasungwa nevayananisi pagakava rayo nevashandi vayo, zviraswe sezvo mumwe muyananisi aimirira vashandi, VaLovemore Madhuku, vaine chekuita nekambani yemagweta yakambomirira vashandi ava.
VaMadhuku nemuyananisi aimirira ZESA, VaGeorge Makings, vanonzi vakawirirana kuti ZESA izadzise chibvumirano chayakanga yaita nevashandi chekuvawedzera mari, asi iyo yakange yoramba ichiti yakanga isina mari yekuita izvi.
Mapato maviri anoti revashandi neZESA akawirirana kutsvaga vayananisi vavanoda sezvinodiwa nemutemo.
ZESA yakakwira kudare repamusoro ichiti VaMadhuku vakanga vasingafanirwi kumirira vashandi sezvo vakatenge vaine divi ravairerekera kuburikidza nekambani yavakanyoreswa nayo segweta, yeMatsikidze and Mucheche, iyo yakambomirira vashandi veZESA.
Asi dzimwe nyanzvi dzemitemo yezvevashandi dzinoti zvave kuitwa neZESA kuda kungotsvaga nzira dzekunonoka nadzo kugadzirisa nyaya iyi, sezvo mapoka aya akatsvaga vanhu vavanoda, vakawirirana zvisineyi nekuti vabva kupi.
Hatina kukwanisa kunzwa kudivi reZESA sezvo tatadza kubata mutauriri wekambani iyi, VaFullard Gwasira.
Gweta, rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights, VaJeremiah Bamu, vanoti vanofunga kuti ZESA iri kuda kungoedza zvayo kumisa nyaya yose negumbo rimwe, iyo ichiziva chokwadi.
VaBamu vanoti kambani iyi ingadai yakaramba VaMadhuku vachangovamba kumirira vashandi vayo sezvinodiwa nemutemo. Izvi zvaizoita kuti vashandi vatsvage rimwe gweta.